Indawo yePaki2 - I-Airbnb
Imi kanye phakathi kwe-Hudson's Bay kunye noMlambo iChurchill, ikhaya lam linombono omkhulu. Sikumgama wokuhamba ukuya kwiindawo ezininzi zomdla.
Zive wamkelekile ukuba usebenzise igumbi lokuhlala kunye nendawo yedesika yekhompyuter.
Ikhaya likufutshane nazo zonke iivenkile kunye neeresityu.
Ifumaneka imini yonke nangokuhlwa. Ikwafumaneka ngetekisi xa ungekho endlwini.